मलेशिया रोजगारी खुल्ला भए पनि शुल्कबारे कुनै तय भएको छैन ? - ramechhapkhabar.com
मलेशिया रोजगारी खुल्ला भए पनि शुल्कबारे कुनै तय भएको छैन ?
नेपाली श्रमिक अब फेरि रोगगारीका लागि मलेशिया जान पाउने भएका छन्। काठमाडौंस्थित मलेशियाली दूतावासले सूचना जारी गर्दै कोरोनाका कारण लगाएको प्रतिबन्ध हटाएको जानकारी दिएपछि नेपाली कामदारका लागि मलेशिया खुला भएको हो। नेपालीको मुख्य श्रम गन्तव्यमध्येको एक मलेशियामा रोजगारीका लागि जान २ वर्षदेखि रोकिएको थियो।
सिन्डिकेट प्रकरणका कारण ०७५ जेठ २ देखि नेपाली श्रमिक मलेशिया रोजगारीमा जान पाएका थिएनन्। त्यसको १० महिनापछि चैत ०७५ मा खुल्ला भएको थियो। रोजगारीका लागि मलेशिया जाने चहलपहल शुरु हुँदै गर्दा विश्वभरि नै कोरोना महामारी फैलिपछि रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भन्दै मलेशियाले फेरि रोक लगाएको थियो।
मलेशिया रोजगारी खुल्ला भए पनि शुल्कका विषयमा कुनै जानकारी नपाएको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालीलाई शून्य लागतमा मलेशिया रोजगारीमा पठाउने सम्झौता भए पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको मन्त्रालयको भनाइ छ। सो विषयमा कुनै आधिकारिक जानकारी नआएको श्रम, राेजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले जानकारी दिए।
सरकारले मलेशिया जाने श्रमिकलाई श्रम स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले मलेशिया जाने श्रमिकलाई श्रम स्वीकृति दिन करिब २ वर्षदेखि रोकिएकोमा प्रचलित कानुनअनुसार फेरि शुरु गर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेका हुन्।
मलेशियाबाट नेपालीलाई प्राप्त रोजगारीको अवसर गुम्न नदिन प्रचलित वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ तथा नेपाल–मलेशिया श्रम सम्झौता प्रतिकूल नहुने गरी नेपाली कूटनीतिक नियोगबाट प्रमाणीकरण भई आएका मागपत्रलाई श्रम स्वीकृति दिने निर्णय मन्त्रालयले गरेको छ। ​मलेशियाले विदेशी कामदार लिन शुरु गरेको र सोअनुसार मागपत्र नेपाली कूटनीतिक नियोगबाट प्रमाणीकरण भई आएकोले श्रम स्वीकृति दिन थाल्ने निर्णय गरिएको हो।